उनले फेसबुकमा एक स्टाट्स लेख्दै व्यंग समेत गरेका छन् ।
उनले अगाडि भनेका छन्,‘अब त्यहाँको नागरिक र आर्थिक स्वतन्त्रता अनि प्रतिगमन रोक्न सिड्नीमा कस्ले आन्दोलन गरिदेला ? आफ्लाई कस्तो पीर लागो बाई !!!'
अष्ट्रेलियाले नेपालले अघिल्लाेसाल नै ल्याउन खाेजेकाे जस्तै समाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुन पास गरेछ।अब त्यहाँकाे नागरिक र आर्थिक स्वतन्त्रता अनि प्रतिगमन राेक्न सिड्नीमा कस्ले आन्दाेलन गरिदेला? आफ्लाई कस्ताे पीर लागाे बाई!!!
— Gokul Prasad Baskota (@GokulPBaskota) February 25, 2021
नेता गोकुल बाँस्कोटा